Vana—Chidzidzo Chokuva Nomutsa
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Krio Kwanyama Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Maya Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Norwegian Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tatar Thai Tiv Tongan Tsonga Turkmen Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
UNOZIVA kuti rusarura chii here?— Rusarura kusafarira mumwe munhu pamusana bedzi pokuti angave akasiyana nesu kana kuti angataura mutauro wakasiyana nowedu. Naizvozvo kuva norusarura zvinoreva kuva nemanzwiro kana kuti mafungiro asina kunaka pamusoro pomumwe munhu usati wanyatsomuziva.
Unofunga kuti zvakanaka here kusada mumwe munhu usati wambonyatsoziva kuti munhu worudzii kana kuti pamusana pokungoti akasiyana newe?— Aiwa, rusarura haruna kunaka, uyewo haruna mutsa. Hatifaniri kuitira mumwe munhu utsinye pamusana pokungoti angave akasiyana nesu.
Pafunge. Pane mumwe munhu waunoziva here ane ganda rine ruvara rwakasiyana norwako kana kuti anotaura mutauro wakasiyana nowako?— Zvimwe unotoziva vanhu vanoratidzika zvakasiyana pamusana pokuti vakakuvadzwa kana kuti vanorwara. Une mutsa norudo kune ivavo vakasiyana newe here?—
Tinofanira kuita sei nevaya vangave vakasiyana nesu?
Kana tichiteerera Mudzidzisi Mukuru, Jesu Kristu, tichava nomutsa kuvanhu vose. Hazvifaniri kumboita musiyano kwatiri kuti munhu angabva munyika ipi kana kuti ganda rake nderorudzii. Tinofanira kuva nomutsa kwaari. Kunyange zvazvo izvi zvisiri izvo zvinofungwa nevanhu vose, ichi ndicho chidzidzo chakadzidziswa naJesu. Ngatitaure nezvacho.
Mumwe muJudha aiva norusarura akauya kuna Jesu ndokubvunza mubvunzo wokuti, ‘Chii chandinofanira kuita kuti ndirarame nokusingaperi?’ Jesu aiziva kuti zvimwe murume wacho akanga achiedza kumuita kuti ataure kuti tinofanira kuva nomutsa kuvanhu vorudzi rwedu bedzi kana kuti dzinza. Saka pane kuti apindure mubvunzo wacho iye pachake, Jesu akabvunza murume wacho kuti: ‘Mutemo waMwari unoti tinofanira kuitei?’
Murume wacho akapindura kuti: ‘Unofanira kuda Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose, uye unofanira kuda muvakidzani wako sokuda kwaunozviita.’ Jesu akati: ‘Wapindura zvakanaka. Ramba uchiita izvi uye uchawana upenyu husingaperi.’
Zvisinei, murume wacho akanga asingadi kuratidza mutsa kana kuti rudo kuvanhu vakanga vakasiyana naye. Saka akaedza kutsvaka kuzvipembedza. Akabvunza Jesu kuti: “Chaizvoizvo muvakidzani wangu ndiani?” Angave aida kuti Jesu ati: “Vavakidzani vako ishamwari dzako” kana kuti, “Vanhu vakaita sewe.” Kuti apindure mubvunzo wacho, Jesu akataura imwe nyaya pamusoro pomuJudha nomuSamariya. Nyaya yacho yakanga yakadai.
Mumwe murume akanga achiburuka hake nomugwagwa achibva kuguta reJerusarema achienda kuJeriko. Murume uyu akanga ari muJudha. Sezvaakanga achifamba, akabatwa nematsotsi. Vakamuwisira pasi ndokumutorera mari yake nembatya dzake. Matsotsi acho akamurova ndokumusiya padivi pomugwagwa ava kuda kufa.
Pashure pechinguva, mumwe mupristi akauya nomugwagwa iwoyo. Akaona murume uya akanga akuvadzwa zvakaipa. Waizodai wakaitei?— Zvino mupristi akangopfuura zvake nokune rimwe divi romugwagwa. Haana kana kumbomira. Hapana chero chaakamboita kuti abatsire murume wacho.
Mumwe murumezve aiva munamati akauya nenzira yacho. Akanga ari muRevhi uyo aishanda patemberi muJerusarema. Aizomira kuti abatsire here?— Aiwa. Akangoitawo zvakaitwa nomupristi.
Pakupedzisira, muSamariya akauyawo. Uri kumuona achiuya here achibuda pakona mumugwagwa wacho? Akaona muJudha akangoti rabada akuvadzwa zvakaipa. Zvino vaSamariya nevaJudha vazhinji vakanga vasingawirirani zvachose. (Johani 4:9) Saka muSamariya uyu aizosiya murume wacho asina kumubatsira here? Aizoti here mumwoyo make: ‘Nei ndichifanira kubatsira muJudha uyu? Aizombondibatsira here dai ndiri ini ndanga ndakuvara’?
Nei muSamariya akanga ari iye muvakidzani akanaka?
Zvino muSamariya akatarisa murume akanga akati rabada padivi pomugwagwa, akamunzwira tsitsi. Aisagona kumusiya kuti afire ipapo. Saka akaburuka pambongoro yake, akaenda kumurume wacho, ndokutanga kutarisira maronda ake. Akaadira mafuta newaini. Izvi zvaizobatsira kuti maronda acho apore. Akabva amonera maronda acho nejira.
MuSamariya akasimudza murume akanga akuvara uyu zvinyoronyoro ndokumukwidza pambongoro yake. Zvino vakaburuka nomugwagwa zvishoma nezvishoma kusvikira vasvika paimba yevafambi kana kuti kahotera kaduku. Ipapo muSamariya akawanira murume wacho nzvimbo yokugara, uye akamutarisira zvakanaka.
Zvino Jesu akabvunza murume waakanga achitaura naye kuti: ‘Ndiani pavarume vatatu ava waunofunga kuti akanga ari muvakidzani wakanaka?’ Waizoti kudii? Akanga ari Mupristi, muRevhi, kana kuti muSamariya here?—
Murume wacho akapindura achiti: ‘Murume akamira akatarisira murume akanga akuvara ndiye akanga ari muvakidzani akanaka.’ Jesu akati: ‘Wagona. Enda unoita izvozvo.’—Ruka 10:25-37.
Iyoyo yakanga isiri nyaya yakanaka here? Inobudisa pachena kuti vavakidzani vedu ndivanaani. Havasi shamwari dzedu dzapedyo bedzi. Uye havasi vanhu vanongova neganda rakafanana neredu bedzi kana kuti vanotaura mutauro wakafanana nowedu. Jesu akatidzidzisa kuti tive nomutsa kuvanhu pasinei nokuti vanobvepi, vanoratidzika sei, kana kuti vanotaura mutauro upi.
Izvi ndizvo zvakaita Jehovha Mwari. Haasaruri. ‘Baba venyu vari kudenga vanobudisira zuva ravo pavanhu vakaipa nevanhu vakanaka,’ akadaro Jesu. ‘Uye vanonayisira mvura vanhu vakanaka nevasina kunaka.’ Saka naizvozvo, tinofanira kuva nomutsa kuvanhu vose, sezvinongoitawo Mwari.—Mateu 5:44-48.
Ungava sei muvakidzani akanaka?
Naizvozvo kana ukaona mumwe munhu akuvara, uchaitei?— Zvakadini kana munhu wacho achibva kune imwe nyika kana kuti ganda rake rakasiyana nerako? Anongova muvakidzani wako, uye unofanira kumubatsira. Kana uchifunga kuti uri muduku zvakanyanya kuti ubatsire, unogona kukumbira munhu mukuru kuti abatsire. Kana kudana mupurisa kana mudzidzisi kana kuri kuchikoro. Kuita izvozvo kuratidza mutsa, sezvakaitwa nomurume weSamariya.
Mudzidzisi mukuru anoda kuti tive nomutsa. Anoda kuti tibatsire vamwe, pasinei nokuti vangava vanaani. Ndosaka akataura nyaya yomuSamariya ane mutsa.
Pachidzidzo ichi chokuva nomutsa kuvanhu pasinei nedzinza ravo kana kuti nyika yavo, verenga Zvirevo 19:22; Mabasa 10:34, 35; naMab 17:26.
Zvine basa here kuti uitire vanhu vose mutsa? Mwari anoona sei unhu uhwu?
Itira Vamwe Mutsa